Home Wararka Ciidamada DFS oo sheegtay inay soo qabteen shabakad ka tirsan Al Shabaab
Ciidamada DFS oo sheegtay inay soo qabteen shabakad ka tirsan Al Shabaab
Ciidamada milatariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor ayaa howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku qabteen rag ay ku tuhmayaan in ay katirsan yihiin Al Shabaab.
Saraakiisha ciidanka Gorgor ayaa sheegay in howlgalka ay ka fuliyeen deegaanka Bariire uu ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka loogana hortagayay kooxaha falalka ammaan daro ka wadda deegaankaasi.
Ciidamada ayaana soo bandhigay labo nin oo dhallinyaro ah oo ay sheegeen in ay katirsan yihiin Al Shabaab, kuwaa oo lagu qabtay howlgalka ay ciidamada Gorgor ka fuliyeen deegaanka Bariire.
Gobolka Shabeelaha Hoose goobaha ay ka joogaan ciidamada Gorgor ayey si joogta ah uga fuliyaan howlgalo ammaanka lagu xaqiijinayo, waxa ayna ciidamada mararka qaar la kulmaan iska caabin uga timaada dagaalyahanada Al Shabaab.
Previous articleCiidamada Maraykanka oo duqeyn ka geeystay qeybo kamida Galgaduud
Next articleFive killed in attack near Kenya’s border with Somalia
Madaxweynaha dalka Eritereeya oo la filayo in uu u safro Somaliland
[Deg Deg] Rooble oo lagu amray in uu qaato masuuliyadda wixii...